आँखा- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — हालसालै तिमीले कसैलाई हातैले केही लेखेर पठाएका छौ ? छौ भने, त्यसमा ‘धन्यवाद’ लेखेका थियौ कि थिएनौं ? थिएनौ भने, जानिराख हस्तलिखित धन्यवादका कुरा । यी कुरा साइकोलजिकल साइन्स जर्नलमा प्रकाशित लेखमा आधारित हुन् ।इन्टरनेटको विकास हुनुपूर्व पत्र प्राय: हातैले लेखिन्थ्यो ।
इमेलको चलन चलेपछि हस्तलिखित पत्रको प्रयोगमा ज्यादै कमी आयो ।
अमेरिकाको टेक्सासस्थित म्याक कोम्बस स्कुल अफ बिजनेसका बजारशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक अमित कुमारले हस्तलिखित धन्यवाद पत्रको फाइदासम्बन्धी अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका थिए । उनीसँगै सिकागो विश्वविद्यालयको स्कुल अफ बिजनेसका व्यावहारिक विज्ञान विषयका प्रोफेसर निकोलस एप्ले पनि अध्ययनमा संलग्न थिए । हालै कुमार र एप्लेले यससम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा तीन प्रयोग गरे । ती प्रयोगअनुसार अध्ययनमा सहभागीले विभिन्न पत्रहरू लेखे । आफ्नो पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कस्तो आश्चर्य, खुसी वा सम्भावना व्यक्त गर्लान् भनेर अनुमान पनि गरे ।
नतिजा के निस्कियो भने, प्रशंसाका लागि हस्तलिखित पत्रमार्फत व्यक्त हुने कृतज्ञता (धन्यवाद) पाउने व्यक्ति त खुसी देखियो नै त्यस्तो पत्र पठाउने व्यक्तिमा पनि सकारात्मक भावना बढेको पाइयो । अध्ययनको निष्कर्ष थियो– दैनिक रूपमा व्यक्त गरिने धन्यवाद नोटले मानिसलाई जीवनको बाटोमा थप प्रेरणा दिन्छ ।
‘हामीले के देख्यौं भने, विचारशील व्यक्ति र इमानदारलाई केही शब्दको धन्यवाद नोट लेख्न खासै समय लाग्दैन,’ कुमार भन्छन्, ‘यसको लागत कम हुन्छ, तर लाभ भने अपेक्षा गरिएभन्दा ठूला छन् ।’ लस एन्जलस टाइम्समा प्रकाशित यससम्बन्धी लेखमा ‘सही धन्यवाद नोट लेख्नका लागि दिइएका केही सुझाव यस्ता छन्– सुरुमा शिष्टाचार जनाउने । जस्तो कि तिमीलाई यस वर्ष धन्यवाद दिन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । आफूलाई गरिएको मद्दत वा दिइएको वस्तुका लागि धन्यबाद दिने । जस्तै : निकै राम्रो कचौराका लागि धन्यवाद । वास्तवमा यो मेरो डाइनिङ टेबलको रंगमा निकै राम्रो देखिएको छ । म जुनसुकै मौसममा पनि यसलाई प्रयोग गर्छु । धन्यवाद नोटमा आफ्नो रुचि र चाहना पनि समावेश गर्नु राम्रो हुन्छ । तर अनिवार्य भने छैन । जस्तै, म नयाँ वर्षमा भ्रमण गर्न उत्सुक छु । आशा गर्छु, तिमी पनि बिदाको आनन्द लिन्छौ ।
के अब यति बुझिसकेपछि पनि तिमी कसैलाई धन्यवाद भन्न वा लेख्न कन्जुस्याइँ गर्छौ ? कुमार र एप्लेको अध्ययनबारे थाहा पाइसकेपछि धेरैले हस्तलिखित पत्रको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक फाइदा बुझ्नेछन् । अनि पक्कै पनि यस्ता धन्यवाद नोट लेख्नेछन् । साथै यस्तो बानी साथीहरूमाझ पनि छिट्टै फैलाउनेछन् ।
(क्रिस्टोफर बर्गल्यान्डको साइकोलजी टुडेमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद)